Sidina bebe kokoa mankany London, Kyiv ary Istanbul amin'ny Air Astana izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina bebe kokoa mankany London, Kyiv ary Istanbul amin'ny Air Astana izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Kazakhstan • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Turkey Breaking News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao Mafana Okraina • Vaovao isan-karazany
Air Astana dia nanambara ny fiakaran'ny hafatr'i Okraina sy Torkia, nanohy ny sidina tany London.
Ny Air Astana dia mampitombo ny refin'ny Istanbul.
Manampy sidina Kyiv bebe kokoa ny Air Astana.
Air Astana dia manohy ny sidina mivantana any London avy any Nur-Sultan.
Air Astana dia nampiditra fahita matetika teo anelanelan'ny Kyiv sy Nur-Sultan ny talata 7 septambra 2021, niaraka tamin'ny renivohitr'i Kazakhstan sy Ukraine izay nifandray intelo isan-kerinandro tamin'ny alatsinainy. Talata sy alakamisy. Ny zotram-piaramanidina koa dia miasa sidina eo anelanelan'ny Kyiv sy Almaty ny alarobia, asabotsy ary alahady.
Air Astana koa dia hanangana fantsona fahatelo eo anelanelany Istanbul ary Almaty ny 17 septambra 2021, miaraka amin'ny sidina ny talata, zoma ary alahady, ary serivisy eo anelanelan'ny Istanbul sy Nur-Sultan ny Alakamisy.
Air Astana dia manohy ny sidina mivantana avy any Londres mankany Nur-Sultan indroa isan-kerinandro amin'ny alarobia sy asabotsy manomboka amin'ny 18 septambra 2021.
Angatahina ny mpandeha hanaraka ny fepetra takiana amin'ny fidirana alohan'ny sidina amin'ny Air Astana's tranonkala.